Umkhuhlane uthathelana isikhathi esingakanani? | Ukuhlolwa - Imfundo Yezempilo | Septhemba 2021
Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Izindaba Ezemidlalo Ezisindayo Inkampani, Izindaba Umphakathi Izidakamizwa Vs. Umngani Imidlalo Inkampani, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Umphakathi, Inkampani Imininingwane Yezidakamizwa Ukuphila Kahle Inkampani Cindezela Ezempilo
Main >> Imfundo Yezempilo >> Umkhuhlane uthathelana isikhathi esingakanani?
Umkhuhlane uthathelana isikhathi esingakanani?
Umkhuhlane uyisifo esithathelwanayo sokuphefumula esithinta ikhala, umphimbo namaphaphu. Igciwane lomkhuhlane, noma umkhuhlane, usakazeka ngamaconsi lapho umuntu onawo ekhwehlela, ekhuluma noma ethimula. La mathonsi angenza angene emakhaleni, emilonyeni, futhi ekugcineni emaphashini abanye abantu futhi abagulise. Ngakho-ke, umkhuhlane utheleleka isikhathi esingakanani?
OKUSHIWO: Ingabe umkhuhlane uhamba emoyeni? Funda ukuthi umkhuhlane usakazeka kanjani
Ngingawusabalalisa umkhuhlane isikhathi esingakanani?
Umkhuhlane uwukuthi iyathathelana kusukela kusuku olungaphambi kokuba izimpawu ziqale ezinsukwini ezinhlanu kuya kweziyisikhombisa ngemuva kokugula. Isikhathi sokufukamela komkhuhlane, noma ukuthi kungathatha isikhathi esingakanani ukuthuthukisa izimpawu ngemuva kokuchayeka nokutheleleka, cishe usuku olulodwa kuya kwezine . Esinye isizathu esenza ukuthi umkhuhlane usabalale ngokushesha okukhulu ukuthi umuntu angathathelana futhi angakhombisi izimpawu zokugula kuze kube yizinsuku ezimbalwa ngemuva kokuthola igciwane lomkhuhlane.
Izikhathi ezithathelwanayo zomkhuhlane, umkhuhlane ovamile, nesisu sesisu ziyafana kakhulu. Ngomkhuhlane ovamile, ungathathelana usuku olulodwa noma ezimbili ngaphambi kokuqala kwezimpawu, futhi ungahlala uthathelana kuze kube amasonto amabili. Kungokufanayo nange-bug yesisu, futhi ngeke uyeke ukusakazeka izinsuku ezimbalwa ngemuva kokuthi useluleme ngokuphelele. Ngokuqondene ne-coronavirus, IHarvard Health ibika ukuthi i-COVID-19 ingathathelana ngamahora angama-48 kuye kwangama-72 ngaphambi kokuqala kwezimpawu. Isikhathi esithathelwanayo siphela cishe ezinsukwini eziyishumi ngemuva kokuxazululwa kwezimpawu. Abanye ochwepheshe bezifo ezithathelwanayo basancoma izinsuku eziyi-14 zokuzihlukanisa.
Esinye isizathu esenza ukutheleleka ngegciwane kuvame kakhulu ukuthi kungasakazeka kalula phakathi kwabantu. Izikhungo Zokulawula Nokuvimbela Izifo ( i-CDC ) uthi umkhuhlane ungasakazeka usuke kumuntu ogulayo uye kubantu abaphilile abakude ngamamitha ayisithupha kuphela. Lokhu kuvame ukwenzeka lapho umuntu ogulayo ekhwehlela, ekhuluma noma ethimula. Kodwa-ke, uma umuntu ophilile ethinta indawo engcoliswe yigciwane lomkhuhlane bese lowo muntu ethinta amehlo, impumulo, noma umlomo, nabo basengozini yokuthola umkhuhlane.
Kunezinhlobo ezine zamagciwane omkhuhlane: umkhuhlane u-A, B, C no-D. Uhlobo A luyimbangela eyinhloko yezifo eziwumkhuhlane, kodwa umkhuhlane B nawo ungadala ubhadane lomkhuhlane. I-Influenza C yaziwa ngokubangela izifo zokuphefumula ezingathi sína kakhulu. Ekugcineni, amagciwane omkhuhlane D awaziwa ukuthi athelele abantu futhi ikakhulukazi akhomba izinkomo. Yize kunezinhlobo eziningi zomkhuhlane, zonke zibangela ukutheleleka okuhlala isikhathi esilinganayo. Ubukhulu besifo bungahluka ngokuya ngobunzima nokho.
Ngisulelana nini kakhulu?
Abantu abanomkhuhlane bathathelana kakhulu ezinsukwini ezintathu kuya kwezine zokuqala ngemuva kokuqala kwezimpawu.
imuphi umuthi wezinhlungu ongawuthatha ngenkathi ukhulelwe
Usuku olungu-1 ngaphambi kokuba kuvele izimpawu Izinsuku eziyi-3-4 ngemuva kokuqala kwezimpawu Izinsuku ezingama-5-7 ngemuva kokuqala kwezimpawu
Qala ukutheleleka Okutheleleka kakhulu Kusathelelana noma ngabe uzizwa ungcono ngokuphelele
Qaphela: Leli thebula elenzelwe kuphela. ICDC ibika ukuthi izingane ezincane nabantu abanamasosha omzimba abuthakathaka bangathathelana ngemuva kwezinsuku eziyisikhombisa.
Izimpawu zomkhuhlane zingaqala ukuvela noma kuphi kusukela kusuku olulodwa kuya kwezine ngemuva kokuthola igciwane lomkhuhlane, futhi yize izimo eziningi zomkhuhlane zixazululwa ngesonto, izimpawu zingadlulela emasontweni ambalwa kwabanye abantu. Nazi izimpawu ezivame kakhulu zomkhuhlane:
Kufanele ngihlale isikhathi esingakanani ekhaya ngiphethwe umkhuhlane?
Ukuhlala ekhaya lapho uphethwe umkhuhlane kubalulekile ukukusiza uphumule futhi usize ukugwema ukugulisa abanye abantu. I-CDC incoma ukuthi abantu abanomkhuhlane, noma abantu abacabanga ukuthi banomkhuhlane, kufanele bahlale emakhaya okungenani bangasebenzi izinsuku ezine kuya kwezinhlanu ngemuva kwezimpawu zabo zokuqala. I-CDC iphinda income ukuthi abantu abanomkhuhlane bahlale ekhaya okungenani amahora angama-24 ngemuva kokuba umkhuhlane wabo uhambe ngaphandle kokuthatha noma yimiphi imishanguzo yokunciphisa umkhuhlane. Uma usemsebenzini futhi uqala ukuba nezimpawu ezifana nomkhuhlane, kungcono uye ekhaya ukuvimbela osebenza nabo ekuguleni.
Ngingabona kanjani uma ngisathathelana?
Kungaba nzima ukusho ukuthi ngabe usathelelana noma ngabe usululame emkhuhlaneni. Kungenzeka ukuba nomkhuhlane izinsuku ezimbalwa, uzizwe ungcono, futhi ube yizinsuku ezithathelwanayo kamuva. Ngamanye amagama, ngoba uzizwa ungcono, lokhu akusho ukuthi awukwazi ukudlulisela leli gciwane komunye umuntu. Indlela engcono kakhulu yokwazi ukuthi ngabe usathelelana yini ukubala ukuthi sekunezinsuku ezingaki kusukela ngosuku owagula ngalo. Uma sekuphele izinsuku eziyisikhombisa noma ngaphezulu selokhu waqala ukuthola izimpawu, kungenzeka ukuthi awusathathelani.
Umkhuhlane uyathelelana noma ngabe unemfiva noma cha. Usazothathelana izinsuku ezinhlanu kuya kweziyisikhombisa noma ngabe umkhuhlane wakho uqubuka kusenesikhathi. Isikhathi esisithathayo ukuthi singasatheleleli kumane nje kuyindaba yokuthi ukuphi kumugqa wesikhathi wezinsuku eziyisikhombisa.
Yini evimba umkhuhlane ukuthi ungasabalali?
Kunezindlela eziningi zokugwema ukuthola nokusabalalisa umkhuhlane. Nazi ezinye zezindlela ezinhle kakhulu:
Ukugeza izandla kaningi: Lokhu kuzokusiza kukuvikele kunoma yimaphi amagciwane angangena emehlweni akho, ekhaleni, noma emlonyeni. Uma ungakwazi geza izandla zakho ngamanzi anensipho, bese i-sanitizer yesandla iyinto engcono kakhulu elandelayo.
Ukugwema ukuxhumana okuseduze nabantu abagulayo: Ukuzama konke okusemandleni akho ukuziqhelelanisa nabantu abagulayo kuzokusiza ukuthi ungabanjwa ngumkhuhlane. Uma ugula umkhuhlane, ukunciphisa ukuxhumana kwakho nabanye abantu kuzokugcina ungasabalalisi umkhuhlane.
Ukumboza umlomo wakho namakhala lapho ukhwehlela noma uthimula:Uma ugula umkhuhlane kanye nokukhwehlela noma ukuthimula, amaconsi amancane aqukethe igciwane lomkhuhlane angahamba emoyeni futhi athelele abanye abantu. Ukumboza umlomo wakho nekhala kuyindlela enhle yokusiza ukumisa lokhu.
Ukugqoka imaski yobuso: Ukuvikelwa othola kukho izifihla-buso zobuso akuyona kuphela i-coronavirus. Isifihla-buso sobuso singakuvikela emakhazeni nasemkhuhlane.
Ukuhlala usesikhathini ngemigomo Ukuthola umkhuhlane kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokuvimbela umkhuhlane. Imishanguzo yomkhuhlane ibilokhu ikhona kufakazelwe ukunciphisa ubungozi bokugula komkhuhlane, ukulaliswa ezibhedlela, nokufa okuhlobene nomkhuhlane.
Ngabe iTamiflu iyasinciphisa isikhathi esithathelwanayo?
Ngaphandle kwalezi zindlela, eminye imishanguzo yokulwa namagciwane inganciphisa isikhathi esithathelwanayo somkhuhlane. UTamiflu ( i-oseltamivir phosphate ) ngumuthi osetshenziselwa ukunciphisa ubunzima bezimpawu, futhi unciphise ubude besikhathi sokugula okunganciphisa ukuthi umuntu uthathelana isikhathi esingakanani. Izifundo zibonisa ukuthi iTamiflu inciphisa ubude obumaphakathi bomkhuhlane ngokuthi usuku olulodwa , kodwa kubalulekile ukuqala ukwelashwa ngokushesha ngangokunokwenzeka kusukela ngesikhathi sokuqala kwezimpawu - kuhle kungakapheli amahora angama-48.
I-Tamiflu nayo ingasiza ukuvimbela umkhuhlane uma othile evezwe ecaleni eliqinisekisiwe lomkhuhlane. Kodwa-ke, kubalulekile ukukhumbula ukuthi iTamiflu akuyona indawo yomuthi wokugomela umkhuhlane waminyaka yonke.
OKUSHIWO: Ngabe umkhuhlane udutshulwe noma uTamiflu uvimbela i-COVID-19?
Ukwelapha kanjani umkhuhlane
Ngaphezu kukaTamiflu, i-CDC incoma eminye imithi emithathu evunyelwe yi-FDA ukwelapha (hhayi ukuvimbela) umkhuhlane, okuyi-Relenza (zanamivir), iRapivab (peramivir), kanye Xofluza (baloxavir marboxil).
Ngaphandle kwemithi elwa namagciwane, eminye imithi ye-homeopathic ikhombisile ukusiza ekwelapheni umkhuhlane. Uma umkhuhlane ungena ekhaya lakho kulobu busika, uzobe uzilungiselele kahle ngokuqongelela I-Boiron Oscillococcinum , kusho uKen Redcross, MD, umbhali we Isibopho: Amatshe Ayizisekelo Ayisi-4 Obudlelwano Obuhlala Buhlala Nobunakekela Nodokotela Wakho futhi umsunguli we I-Redcross Concierge . Ucwaningo lomtholampilo lukhombisa ukuthi uma lisetshenziswa kwizimpawu zokuqala, i-Oscillococcinum isiza ukuqeda isikhathi nobukhali bezimpawu ezinjengomkhuhlane ezinjengezinhlungu zomzimba, ikhanda, umkhuhlane, ukugodola nokukhathala. Lo muthi we-homeopathic utholakala kabanzi ezitolo ezinkulu zasendaweni noma emakhemisi kuwo wonke umuntu oneminyaka emibili kuya phezulu.
Uma unentshisekelo yokufunda kabanzi mayelana ukuvimbela kanjani noma welapha umkhuhlane , ungahlala uhlela i-aphoyintimenti nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo. Njengoba isikhathi somkhuhlane sesiseduze, kusengumqondo omuhle ukuthi uzilungiselele uma kwenzeka ugula.
Izidakamizwa ezithandwa kakhulu kuSingleCare ngo-Ephreli
ubani igama elijwayelekile le-prevacid
ungabamba inyumoniya kumuntu onayo?
iphilisi ukuvimbela ukutheleleka kwemvubelo ngenkathi usebenzisa ama-antibiotic
umkhuhlane uhlala isikhathi esingakanani emakhazeni
ukwelapha ukutheleleka kwemvubelo ngenkathi usebenzisa ama-antibiotic
yimuphi umuthi ongcono kakhulu womkhuhlane